1 Samuel 24 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Samuel Nhoma a Edi Kan 24:1-22
Dawid nyaa Saul nso wankum no (1-22)
Dawid nyaa obu maa nea Yehowa asra no (6)
24 Bere a Saul kɔtaa Filistifo no so wiei a ɔsan bae no, wɔbɛka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ! Dawid wɔ En-Gedi+ sare so.” 2 Ɛnna Saul faa mmarima 3,000 a wɔapaw wɔn afi Israel nyinaa kaa ne ho sɛ wɔrekɔhwehwɛ Dawid ne ne mmarima no wɔ abotan akɛse no mu, baabi a bepɔw so mpɔnkye tena no. 3 Bere a Saul nam kwan so no, okoduu nguammuw a wɔde abo ayɛ no ho, na na ɔbodan bi wɔ hɔ. Saul kɔɔ mu sɛ ɔrekogya n’anan, na na Dawid ne ne mmarima no nso tete ɔbodan no mu+ wɔ ɔfã noho. 4 Dawid mmarima no ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛnnɛ Yehowa reka akyerɛ wo sɛ, ‘Hwɛ! mede wo tamfo rehyɛ wo nsa,+ enti nea wopɛ biara, fa yɛ no.’” Ɛnna Dawid sɔre yɛɛ brɛoo kotwaa Saul ataade nsasin ano. 5 Nanso Dawid koma bɔe*+ sɛ watwa Saul ataade ano. 6 Ɔka kyerɛɛ ne mmarima no sɛ: “Ɛmpare me sɛ megyina Yehowa anim ayɛ ade a ɛte saa atia me wura a Yehowa asra no na mateɛ me nsa aka no, efisɛ Yehowa asra no.”+ 7 Dawid nsɛm yi nti, ne mmarima no twe sanee;* wamma wɔamfa wɔn nsa anka Saul. Saul de, ɔsɔre fii ɔbodan no mu kɔɔ ne kwan. 8 Ɛnna Dawid sɔre fii ɔbodan no mu, na ɔteɛɛm frɛɛ Saul sɛ: “Me wura ɔhene!”+ Bere a Saul twaa n’ani hwɛɛ n’akyi no, Dawid bɔɔ ne mu ase kotow de n’anim butuw fam. 9 Dawid ka kyerɛɛ Saul sɛ: “Adɛn nti na woretietie nkurɔfo ano sɛ, ‘Hwɛ! Dawid repɛ wo adi wo bɔne’?+ 10 Ɛnnɛ da yi, wode w’aniwa ahu sɛnea Yehowa de wo hyɛɛ me nsa wɔ ɔbodan no mu. Nanso bere a obi kae sɛ minkum wo no,+ mihuu wo mmɔbɔ, na mekae sɛ, ‘Meremfa me nsa nka me wura, efisɛ Yehowa asra no.’+ 11 Me papa, hwɛ sɛ w’ataade nsasin ano kura me nsam. Mitwae, nanso mankum wo. Afei de, w’ankasa woahu sɛ menyɛɛ m’adwene sɛ medi wo bɔne anaa mɛtew wo so atua. Menyɛɛ wo bɔne,+ nanso wo de, woretaataa me apɛ me akum me.*+ 12 Yehowa mmu me ne wo ntam atɛn;+ Yehowa na obetua wo ka ama me.+ Me de, meremfa me nsa nka wo.+ 13 Sɛnea tete bɛ no ka no, ‘nnipabɔnefo de, bɔne ara na wɔbɛyɛ’; me de meremfa me nsa nka wo. 14 Hena na Israel hene atu n’ani asi no so yi? Hena na wotaataa no yi? Me ɔkraman funu yi? Sommɔre baako pɛ yi?+ 15 Yehowa bɛyɛ ɔtemmufo na wabu me ne wo ntam atɛn, na obehu na wadi m’asɛm ama me,+ na wabu me atɛn agye me afi wo nsam.” 16 Bere a Dawid ano sii no, Saul kae sɛ: “Me ba Dawid, wo nne na mete yi anaa?”+ Ɛnna Saul sui denneennen. 17 Ɔka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Woteɛ sen me, efisɛ papa na woayɛ me, nanso bɔne na mede atua wo ka.+ 18 Ɛnnɛ woama mahu sɛ wo ne me adi no yiye, efisɛ Yehowa de me hyɛɛ wo nsa, nanso woankum me.+ 19 Hena na onya ne tamfo a, ɔde ne ho bɛkyɛ no? Nea woayɛ ama me nnɛ yi nti, Yehowa bɛma wo akatua pa.+ 20 Afei hwɛ! minim sɛ wo na wubedi hene, na wo nsam na Israel ahenni begyina.+ 21 Enti ka me ntam wɔ Yehowa din mu+ sɛ worentɔre m’asefo* a wobedi m’akyi aba no ase, na worempopa me din mfi me papa fi.”+ 22 Ɛnna Dawid kaa Saul ntam, na afei Saul kɔɔ ne fi.+ Dawid ne ne mmarima no de, wɔforo kɔɔ guankɔbea hɔ.+
^ Anaa “ahonim buu no fɔ.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ɔbɔɔ ne mmarima no hwetee.”
^ Anaa “ayi me kra afi hɔ.”